यी हुन् अब चर्चित डनहरु – Kathmandutoday.com
यी हुन् अब चर्चित डनहरु
काठमाण्डु टुडे २०७२ भदौ ६ गते १७:३१ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, ६ भदौ– भर्खरैमात्र गुन्डा नाइकेका रुपमा चिनिएका कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटे प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । घैंटेको मृत्युपछि प्रहरीको कामलाई यतिबेला धेरैले प्रशंशा गरेका छन् । इन्काउन्टरपछि एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले काठमाण्डु टुडेसँग कुरा गर्दै समाजबाट गुन्डाका नाममा फैलिएका टोले गुन्डालाई तह लगाउने बताएका छन् । यसअघि अर्का चर्चित डन दिनेश अधिकारी उर्फ चरीलाई पनि प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारेको थियो । यससँग खनालले समाजबाट डनवाद हटाउने बताउँदै अन्य डनलाई पनि निगरानिमा राखेको बताएका छन् । यसै क्रममा हामीले डनका नाममा चिनिने केही नामहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
१. गणेश लामाः
पछिल्लो समय डनको प्रभाव जमाउने क्रममा गणेश लामाको नाम निकै चर्चामा छ । काभ्रे घर भएका लामा फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य तथा विजयकुमार गच्छेदार निकट मानिन्छन् । डन दिपक मनांगेको पछि लागेर विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका लामाले पछि आफ्नो छुट्टै समूह बनाई गुण्डागर्दी सुरु गरे । उनले ठमेलका डान्सबारदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकासम्म सञ्जाल बिस्तार गरेका थिए । सम्पत्ति बिस्तारै करोडौं हुन थालेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनी बिरुद्ध मुद्धासमेत हाल्यो ।
तर, लामा केही समय जेल बसेपछि दोसो संविधानसभामा उम्मेदवारी दिएको भोलीपल्ट नै विशेष अदालतमा ३ करोड धरौटी बुझाएर छुटे । कम्पनी खोलेर ठेक्कापट्टा गर्दै आएका छन् । उनको ललितपुरको ग्वार्को, जडिबुटी र ललितपुरमा गरी करिब ३० आना जग्गा, सिन्धुपाल्चोकको सिमाघाट मेलम्ची र सिरुवा कन्सट्रेन्स प्रालिमा ७५ प्रतिशत लगानी छ ।
२. काजी शेर्पाः
उपत्यकाका करोडपति डनमध्ये काजी शेर्पा पनि एक हुन् । मनांगे र चक्रे मिलनको पछि लागेर गण्डागर्दी गर्ने शेर्पा ठमेल किचेनमा घाटा भएपछि अबर लागेका थिए । यिनीसँग अहिले काठमाण्डु उपत्यकामा मात्र करिब दुई सय रोपनी जग्गा भएको बताइन्छ । काजीलाई दुई वटा ज्यान मार्ने मुद्धासमेत लागेको थियो । सोलुखुम्बुका काजी १० वर्षअघि प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचिमा थिए ।
तर, उनको प्रहरीको उच्चतहसम्म पहुँच भएको र नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको रासन ठेक्कासमेत हात पार्न सफल भएपछि उनको नाम एकाएक गायव भएको बताइन्छ । उनी निकै चलाख डनका रुपमा चिनिन्छन् । आफू बाहिर नदेखिने तर, आफ्नो संजालमार्फत् हप्ता असुली, चन्दा माग्ने लगायतका विभिन्न धन्दा चलाउने गर्छन् । उनको हाइड्रोपावरदेखि बालुवा व्यवसायमा लगानी छ । शेर्पाको उच्च राजनीतिक तहसम्म पावर रहेको बताइन्छ ।
३. चक्रे मिलनः
मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलन विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नाम हो । उपत्यकाको चक्रपथमा हुर्किएका चक्रे दरबारको सदस्य निकट मानिन्थे । बालुवाको कारोवारबाट आफ्नो प्रभाव जमाएका चक्रे पछि फिरौती असुल्ने काममा लागे । चाबहिल, गौशाला, सुन्धारा लगायतका क्षेत्र उनी प्रभावित मानिन्छ । उनले नेटवर्क भने मुलुकभर रहेको प्रहरी दाबी गर्छ ।
उनीमाथि राजीव शाह, सञ्जय श्रेष्ठ, राजु थापा, यादव डंगोल, रोहित श्रेष्ठलगायतकाको हत्या प्रयास गरेको, अपहरण कार्यमा संलग्न भएको लगाएतका मुद्धा लागेको थियो । तर, उनले त्यसमा सफाई पाएका थिए । उनीमाथि हातहतियार तथा खरखजाना अभियोगसमेत लागेको थियो । अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै मुद्धासमेत खेपेका चक्रेले मिलन फाउन्डेसनमार्फत् सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न छन् । पहिलो पुस्ताको डन मानिले उनी एमाले निकट मानिन्छन् ।
४. दिपक मनाङेः
दिपक मनाङे पहिलो पुस्ताका डन मानिन्छन् । उनी २०६४ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जन्मिएका डन हुन् । चक्रे, दिपक र राजु गोर्खाली पहिले एउटै समूहमा थिए । अभिषेक शाहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एक वर्ष जेल सजाय पाएका दिपकले अदालतमा, ‘म मनाङे होइन गुरुङ हुँ’ भनेपछि उनी रिहा भएका थिए । उनी यसरी कुटपिटको अभियोगमा पटक–पटक जेल चलान हुँदै छुट्दै आउने गरेका छन् । जसका कारण उनको नाम चर्चामा आयो । मनाङेले कोलकत्ता र सिक्किममा पढेका थिए ।
उनले आफ्नो पहुँच ठमेलको बजारबाट बढाए । उनले ठमेलमै डिस्को खोलेर रात्री व्यवसायमा आफ्नो हात बढाउँदै गए । ठमेलमा खुलेका सबैजसो डान्सबारमा उनको हिस्सा थियो । उपत्यकामा ठमेल, दरबारमार्ग, नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी लगायतका क्षेत्र उनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । उनले चक्रे र काजीको ज्यान मार्ने प्रयास गरेकोसमेत अभियोग लागेको थियो । अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले मागेको २ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी नबुझाएपछि उनी तीन महिना जेल बसेका थिए । तर, पछिल्लो दिनहरुमा भने उनको नाम खासै चर्चाम छैन । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक निकट मानिन्छन् ।
सुजन पौडेल उर्फ रमेश बाहुन प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचिमा परिसकेका डन हुन् । हत्या, अपहरण, टेन्डर, फिरौती लगायतका अभियोग लागेका बाहुनमाथि प्रहरीमा निकै कम उजुरी आउने गर्छ । अत्यन्तै ‘सेफसाइ’ मा बसेर आफ्ना अपराधिक गतिबिधि गर्ने भएकाले उनीबिरुद्ध कम उजुरी आउने प्रहरीको भनाई छ । बाहुनले लामो समयदेखि भारतमा बसेर ठेक्कापट्टासमेत चलाएका थिए र भारतमा उनी पक्राउ परेकोसमेत हल्ला थियो ।
उनी नेपाली सेनाको रेन्जरगणका सिपासी भएको बेला अपराधिक गतिविधिमा लागेपछि जागिर छाडेर डन बनेका हुन् । रामेछाप घर भएका क्षेत्री जातका उनी वास्तवमा बाहुन भने होइनन् । उनी धेरैपटक पेस्तोलसहित पक्राउ परिसकेका छन् । उनले हाउजिङ क्षेत्रमा आतंक मच्चाएर ठूलो धनरासी जम्मा गरेका थिए । हाल जेलमा रशेका बाहुन एमाले निकट मानिन्छन् ।
६. राजु गोर्खालीः
अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न डन राजु गोर्खाली आफ्नै साथी राकेश लिम्बुको हत्या अभियोगमा उनी तीन वर्ष जेल बसेका थिए । बुढा डन मानिने गोर्खाली अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएका थिए । बालुवा ठेक्काबाट पैसा कमाएपछि उनले मनोरञ्जन व्यापारमा सैसा लगाएका थिए । चक्रे र मनाङेको सहयोगमा सुरुमा यिनले आफ्नो पहुँच बढाएका थिए ।
उनले जेलबाट छुटेपछि विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएका थिए । उनी जेल परेका बेला उनलाई छुटाउन दलका नेतादेखि व्यापारीसम्मले निकै दौरधुप गरेका थिए । हाल उनले जय नेपाल हलसँगै ६२९ नामक रेष्टुरेन्ट संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।
६. परशुराम बस्नेतः
गुण्डागर्दी गरेर अवैध सम्पत्ति जोड्ने नाममध्ये कृष्ण बस्नेत उर्फ परशुराम बस्नेतको नाम पनि आउँछ । अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दुई करोड रुपैयाँ धरौटी नतिरेपछि उनलाई जेल चलान गरिएको थियो । तर, पछि उनी रकम बुझाएर छुटेका थिए । विराटनगरलाई आफ्नो आधार इलाका बनाएर गुण्डागर्दी गर्ने बस्नेतमाथि १२ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्धा परेको थियो । एमाले निकट रहेर राजनीति गर्दै आएका उनी विभिन्न अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न मानिन्छन् ।
विराटनगरका व्यापारीदेखि घरजग्गा खरिद बिक्रिमा अधिपत्य जमाएका बस्नेतले यातायात व्यवसायीसँग पनि मोटो रकम उठाउने गरेका थिए । बस्नेतले चाहेमा जुनसुकै घर वा जग्गा आफूले तोकेको मोलमा किन्ने गरेको भन्दै कुनै समय विराटनगरमा आतंक फैलिएको थियो । उनको ज्यादति सञ्चारमध्यममा आएपछि पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि आक्रमण गरेर चर्चामा आएका थिए ।